विवाहपछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन् यी ४ राशिका युवती
रोचक विवाहपछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन् यी ४ राशिका युवती
Nepal Online Patrika| Kathmandu: विवाहलाई पवित्र बन्दन मानिने गरिन्छ। विवाहपछि युवतीहरु पराई घरमा श्रीमती बनेर जाने प्रचलन नेपाली समाजमा छ। पराई घरमा पुगेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न युवतीका लागि पक्कै पनि सजिलो हुँदैन्। पराई घरमा कसैले दुख र कसैले सुखको जीवन भोक्नु पर्ने अवस्था आउने गर्दछ। तर शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशि भएका युवतीहरु छन्। जसले श्रीमानको घरमा राज गरेर बस्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ?
कन्या राशिः यो राशी भएका महिलाहरुमा श्रीमानलाई सजिलै काबुमा राख्ने क्षमता हुन्छ । यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन । आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,दण्ड, भेदको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन्।
वृश्चिक राशीः यो राशी भएका महिलाहरु अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा रुष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन् । पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि डराउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हावी हुने आदत यिनीहरुमा हुन्छ ।
कर्कट राशिः यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन् । साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ । घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन् । श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन । कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन् ।
सिंह राशिः यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन् । यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ ।
कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्:
काठमाडौँ । कपाल झर्ने समस्या अधिकांश मानिसको जल्दोबल्दो समस्या हो । महिला भन्दा पुरुष यो समस्याबाट पीडित छन् । प्राय अवस्थामाकपाल झर्ने समस्या कुनै रोग बा बाह्य तत्वसँग सम्बन्धित छैन । कपाल बढ्न छा्ड्नु र कपाल भाँचिनु कपाल झर्नुका मुख्य लक्षण हुन् ।
कपाल झर्नबाट बचाउन अध्ययनहरुले कपाल सुहाउदो स्याम्पु, कपालको सफाई र पूर्ण पोषणमा जोड दिएका छन् । शरिरका अन्य अंगको वृद्धि तथा विकासको लागि पोषक तत्व जरुरी भए झै कपालका लागि पनि पोषक जरुरी हुन्छ ।
कपाल झर्नबाट रोक्न कस्तो खानेकुरा खाने ?
ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त खानेकुराले कपाल झर्नबाट रोक्छ । बदाम, टुना र साल्मोनमा यस्तो भिटामिन पाइन्छ । यी खानेकुरामा हुने पोषणले तपाईको कपाल झर्नबाट रोकिन्छ र निरन्तर बृद्धि हुन्छ । यसले कपालालाई बढी इलाष्टिक बनाउने र टुट्नबाट बचाउछ
जिंकयुक्त खानेकुराः चना, ओस्टर्स र बिफमा प्रशस्त जिंक पाइन्छ जसले कपालको तन्तुलाई बृद्धि गरि गुमेको कपाल पलाउन सहयोग गर्छ । जिंकले तपाईको टाउको र कपाल स्वास्थ्य बनाउछ । जिंकले कपाल बृद्धिका लागि आवशयक हर्मनको नियन्त्रण गर्छ ।
प्रोटिनः प्रोटिन कपालको लागि प्राथमिक पोषक तत्व हो । प्रर्याप्त प्रोटिन खाएमा तपाईलाई तालु खुइलिनबाट बचाउनुका साथै कपाल फुल्नबाट समेत जोगाउँछ ।
रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउन एक मात्र पत्ता दालचिनी!
Kabita - September 28, 2020 0
दालचिनी खाने बानीले तपाईंलाई स्वस्थ राख्नुका साथै प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो राख्नका लागि मद्दत समेत पुर्याउछ । नियमित रुपमा मात्र एक पत्ता दालचिनी खानाले हाम्रो स्वास्थ्यमा यस्ता फाइदा गर्दछ।
छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ ।
यी ४ घरेलु उपाय दाँतको किरालाई मार्न र दुखाइ कम गर्नका लागी अपनाउनुस्
Nepal Online Patrika - September 27, 2020 0
नियमित ब्रस नगर्दा दाँतको बीचमा आफूले खाएका अन्नका कणहरु बस्दछन्, जब यी कणहरु सड्न थाल्छन्, तब दाँतमा किरा लाग्न थाल्छ ।
कालो भएको घुँडा तथा कुहिनोलाई गोरो बनाउन यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, ३ दिनमै पाउनुहुनेछ फरक
Kabita - September 27, 2020 0
साधारणतया हाम्रो हातको कुहिनो र घुँडाको भाग शरीरको अन्य भागको तुलनामा बढी कालो हुने गर्दछ । केही बाहिय कारण तथा थिचिएका कारण शरीरको अन्य भागको तुलनमा ती भाग बढी कालो देखिन्छ ।
एसिड आक्रमणका दोषिहरुलाई कडा कारवाही गर्ने अध्यादेश जारी
तेजाब आक्रमणका दोषिहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।
मुम्बई दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा
१३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-ट्‍वान्टी क्रिकेटमा आज (सोमबार) साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । सिजनको पहिलो खेल हारबाट सुरु गरेको मुम्बईले दोस्रो खेलमा भने जित निकालेको थियो ।
छाती दुखेर अस्पताल गएका एकजना कलाकार कोरोनाको डरले अस्पतालको गेटबाटै फर्के, तर उनलाई हृदयघातले छोडेन, केही समयपछि उनको मृत्यु भयो ।
‘१२‌औं श्रृंखला सुरु कौन बनेगा करोडपती’को, के-के नियम फेरिए ?
लोकप्रिय कार्यक्रम तथा खेल ‘कौन बनेगा करोडपती’को १२ औँ श्रृंखला यही सोमबार सुरु हुँदैछ ।